Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football Tantara Florentino Luis Childhood plus Plus Untold Biography Facts
Nohavaozina farany teo Jona 16, 2020
Ny zavamisy momba ny tantaram-piainan'i Florentino Luis dia manadihady feno momba ny tantaran'ny fahazazany, ny fiainana voalohany, ny ray aman-dreny, ny ray aman-dreny, ny sakaizany, ny vady, ny fiainana manokana ary ny fiainana. Fakafakao tanteraka ny fisehoan-javatra malaza nanomboka tamin'ny andro voalohany hatramin'ny naha-malaza azy.
Florentino Luís Life Tantara- Jereo fa ny tantaran'ny tantaram-piainany. 📷: Picuki
Eny, ianao sy ianao mahalala fa mpanao baolina kambôra dia manana izany N'Golo Kante-Ny angovo azo ampiasaina amin'ny fomba nilalao azy. Io fihirana io, tsy isalasalana, mahita azy eo amin'ny laharana ho lasa iray amin'ny Mpampiasa ambony folo mivelatra eo amin'izao tontolo izao.
Na eo aza ny fahazoan-dàlana dia tsapanay fa mpankafy baolina kitra vitsivitsy ihany no nieritreritra ny hamaky ny Florentino Luís Biography izay nomaninay, ary tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Tantaran'i Florentino Luis Childhood:
Ho fanombohana, ny anarany dia 'Tino', ary ny anarany feno dia 'Florentino Ibrain Morris Luís'. Ny Football Football Portuguese dia teraka tamin'ny andro faha-19 aogositra 1999 tamin'ny reniny Laura Luis, ary ny rainy, Morris Luis, tao an-tanànan'i Lisbon, Portugal.
Araka ny hitantsika eto ambany, ny Family's Breadwinner dia teraka ho zanaka lahimatoa sy zanany nateraky ny firaisana teo anelanelan'ny reniny tsara tarehy sy ny dadany mivily maranitra. Ny ray aman-dreny Florentino Luis dia toa nanana azy tamin'ny faha-20 taonany.
Florentino Luís dia teraka tamin'ny lahimatoa voalohany sy zanany voalohany amin'ny fianakaviany. 📷: IG
Noho ny elanelan'ny taona eo anelanelan'i Tino sy ny mpiray tam-po aminy, dia azo jerena ny zavatra iray. Ny zava-misy fa ny mpanao baolina dia tokony nandany ny folo taona voalohany tamin'ny fahatanorany, ny ankamaroany manodidina ny dadany sy ny reniny. Ny zananilahy lahy (sary eo ambony) dia mety tsy ho teraka teo anelanelan'ny taona 2000 ka hatramin'ny 2010.
Florentino Luis Tanora Latina:
Voalohany indrindra, tsy misy firaketana an-tsoratra izay milaza an'i Tino, nobeazina tao anatin'ny fianakaviana manankarena. Nihalehibe izy tao Massamá, paroasim-pirenena taloha tao amin'ny kaominina Sintra, Distrikan'i Lisbon any Portugal. Araka ny antontanisa, manodidina ny 30,000 ny olona mipetraka ao Massamá, ary ny ray aman-dreny Florentino Luis dia anisan'ireo manana ny ankamaroan'ny tokantrano antonony.
Ny ray aman-drenin'i Florentino Luís, toy ny ankamaroan'ny olona ao Massamá, dia niasa fianakaviana misy saranga antonony. 📷: Instagram
Vao maraina, ilay dadabeny modely dia manana fomba iray handrafetana ny ankohonany. Na Morris sy ny vadiny Laura dia toa ny portogey salanisa tsotra izay tsy nitolona tamin'ny vola. Rehefa avy niteraka an'i Florentino izy roa dia samy nanao ny teti-pianakaviana ho an'ny fandrosoana manokana ary hanamaivana ny enta-mavesatra hanohanana ireo ankohonany any Portugal sy Afrika.
Avy amin'ny fianakaviana fianakaviana Florentino Luis:
Rehefa mitsara amin'ny tarehin'izy ireo dia hita ny reny sy ny rain'ny mpilalao baolina kitra TSY MISY fiavian'ny fianakaviany avy any Portugal. Araka ny Florentino Luis Wiki Page, ny mpilalao baolina kitra dia avy amin'ny fianakaviany avy any Afrika, tepat Angola.
Fantatrao ve? ... mpiara-monina Portiogey - ny tiany Helda Costa ary William Carvalho manana koa ny razambeny avy any Angola. Ary farany, ny fananana ny anarana hoe 'Luis' dia tsy midika, fa i Florentino kosa Luis Suarez.
Florentino Luis Biography- Avy am-piadiana amin'ny Football Care:
Ny eritreritra momba ny ho lasa matihanina dia tamin'ny taona 2006, taonan'ny World Cup Year mahafinaritra. Rehefa afaka izany, nifaly ny fifalian'ny ankabeazan'ny Portiogey sy Angolan raha samy niorina tamin'ny Vondrona D tamin'ny laharana voalohan'ny fiadiana ny amboara eran-tany 2006 izy ireo. Ho an'ny dadan'i Florentino Luis, fanararaotra bebe kokoa ho an'ny fianakaviany izany fa tsy ny fijerena ny fifaninanana fotsiny.
Ny tompon-daka eran-tany 2006 dia mpandinika ny Dadany efa nahita mialoha izay nahita fotoana ho an'ny fianakaviany. 📷: Wiki sy IG
Fantatrao ve? ... Ny fampisehoan'i Portugal sy ny famirapiratan'ny zanatany portogey (Angola) dia nahatonga fianakaviana maro hanomboka hahita ny ho avin'ny zanany amin'ny alàlan'ny baolina kitra.
Ny raharaha dia tsy hafa noho ny an'ny ray aman-drenin'i Florentino Luis, indrindra fa ny dadany no tonga. Herintaona monja taorian'ny amboara eran-tany dia efa nanomboka nametraka ny fototry ny asany i Tino kely (7 taona).
Tantara momba ny fikarakarana an'i futsal ary mila fikarakarana ny fianakaviana:
Vao nanomboka ny amboara eran-tany 2006 dia nanomboka niankavia, havanana ary afovoany ny oniversite tanora tany Portugal. Ny ray aman-dreny Florentino Luis dia nanapa-kevitra ny paikady hampiasana ny fomba tsy dia malaza hanombohana ny asan'ny zanany lahy. Raha niditra am-pilalaovana baolina kitra ny ankamaroan'ny ankizy, dia nanaiky ny zanany lahy ny ray aman-dreny roa mba hanomboka Futsal- variana amin'ny baolina kitra nilalao tao amin'ny fitsarana mafy, ary indrindra tao anaty trano.
Ny mpilalao baolina kitra Future dia nanomboka nilalao an'i futsal niaraka tamin'ny ekipa iray antsoina Tercena Futsal. Ny porofo eto ambany dia nanambara fa Massama (izay nipetrahan'i fianakavian'i Florentino Luis) dia lalan'ny dimy minitra monja nankany Tercena izay nisoratan'i Tino ho an'ny Futsal. Ny fahazoan-dàlana dia mamela ny dadan’i Florentino sy ny reniny mba hijery akaiky ny fivoarany.
Noho ny fanaraha-maso akaiky ny ray aman-dreny, ny Portiogey tanora tao anatin'ny fotoana fohy, dia nanomboka nampiavaka ny tontolon'ny Futsal namorona. Ny marina dia ny filalaovana baolina kitra anatiny no nanome an'i Florentino Luis ny hetsika haingana, ny fandalovana fohy, ny fifehezana fohy, ny fihoaram-pefy, ny fihenjanana ary ny fahaizay fantatsika fa ananany anio.
Biography Florentino Luis - Ny làlana ho an'ny tantara malaza:
Tamin'ny taona 2009 (roa taona taorian'ny nanombohany nilalao ny futsal) dia nivonona ny hilalao baolina eo am-baravarana ilay zazalahy. Mba hahatongavana fanombohana milamina dia mbola nitazona ny paikadiny teo aloha ihany ny ray aman-dreny Florentino Luis - izany hoe mihazona lavitra ny club mankany an-tokantranony.
Nihazona ny fidirana am-baravarana, dia nisoratra anarana tao amin'ny Real SC (Real Massamá) i Tino, klioba iray any Queluz, tanàna manodidina ny 2.7km (6 minitra).
Mifamadika amin'ny Football-out-Football dia aloa:
Nandritra ny Real Sport Clube, ny fampiasana ny traikefany Futsal tany am-boalohany dia nanomboka naneho ny tombony farany indrindra. Little Florentino Luis, araka ny voamarika ao amin'ny horonantsary etsy ambany, dia nihalehibe ho karazana karazan'ny karazan'ny baolina kitra, iray izay nanapaka ny namany sy mpanohitra azy tamin'ny tanjona. Tsy hadino ny nandehanan'ny zazalahy iray fankalazana tanjona mahafinaritra.
Tonga ny Famonoana ireo klioba lehibe:
Lasa zavatra tsara indrindra amin'ny Akademia Real Sport Clube dia midika zavatra iray. Tsy vitan'ny hoe misy goavambe portogey ho tonga hanafika ny akademia hitadiavana azy.
Ny marina dia, ilay tanora Florentino Luis irery dia nijanona tao amin'ny Real Sport Clube nandritra ny herintaona talohan'ny nahatongavan'ny tompon-trano portogey SL Benfica hangataka ny dadany sy ny reniny hanao sonia izay nankatoaviny tamim-pahatsorana.
Biography Florentino Luis - Ny fitomboan-tantara:
Vetivety dia nirotsaka tao amin'ny Akademia SL Benfica i Florentino, hira iray izay nahita azy nahazo diplaoma tamin'ny loko manidina tamin'ny taona 2018. Rehefa nahazo diplaoma, ny andian-dahatsoratra feno dia nanomboka ny fikatsahana ny làlana mankany amin'ny ekipan'ny klioba club. Na izany na tsy izany dia tsy vitany izany - tao anatin'ny herintaona monja.
Raha mikasika ireo izay nanaraka ny asa ho an'i Florentino Luis dia izy rehetra nino fa ny superstardom no mpilalao ny mpilalao baolina. Sahala amin'ireo olom-bitsy tamin'ny taonany dia nanomboka nanampy an'i Benfica nanangona tropy lehibe toa ny Primeira Liga, Supertaça sns.
Rehefa feno 19 taona dia efa nampiasaina hanangonana Trôma lehibe ny mpilalao baolina kitra portogey. 📷: Picuki
Amin'izao faha-20 taonany izao, i Florentino Luis dia toy ny pro pro-vanim-potoana efa ela, izay mamirapiratra tokoa ny ho avy. Like Gedson Fernandes nanao, ilay tovolahy dia niatrika ny zava-tsarotra rehetra natrehina. Ao amin'ny Benfica dia tonga ny fahombiazany leaps sy fehezina.
Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana ny Biography Florentino Luis, ny afovoan-tany mpiaro tena no talenta farany amin'ny tsipika famokarana SL Benfica. Asides arahin'ireo klioba ambony any Eropa dia i Tino ankehitriny no laharana ho toy ny tsara indrindra Niresaka momba ny Wondererkid ho an'ny Midfielders ny 2020 Sport Sport. Ny ambiny, araka ny nambarany (ao anatin'izany ny horonantsary nisongadina nataony etsy ambany) dia tantaram-pitantanana ankehitriny.
Florentino Luis Tantaram-pitiavana:
Noho ny fangatahan'ny baolina kitra matihanina dia tanora maro no tsy mampiseho ireo sakaizany. Izany kosa, na izany aza, tsy ny an'ny Portiogey, izay ny tantaram-pitiavana tonga lafatra dia manaitra ny fo.
Voalohany, ampahafantarintsika ilay iray izay sakaizan'i Florentino Luis talohan'ny naha-vadiny azy. Tsy izy afa-tsy i Bruna Guerreiro, ilay ramatoa tompon'andraikitra amin'ny fanaovana an'i Tino ho lehilahy sambatra indrindra eto an-tany.
Ilay vehivavy sakaizan'i Florentino Luis dia nivadika vady - Bruna Guerreiro. 📷: Novagente
Araka ny fandaharam-potoanan'ny media sosialy, samy mpinamana tsara izy ireo taty aoriana. Nanomboka niasa tamin'ny faran'ny taona 2016. Nanaraka ny faneken'ny ray aman-dreniny an'i Bruna Guerreiro, mpilalao baolina portogey, tamin'ny febroary 2020, dia nanapa-kevitra ny handefa ny fanontaniana farany. Tino tokoa no nanoloran'i Tino tamin'ny fomba kanto.
Ilay tanora (20 taona) dia sahy hametraka ilay fanontaniana farany izay atahoran'ny mpanao baolina maro amin'ny taonany.
Nandritra ny taona nahaterahantsika nanoratra tantara momba ny biolojika baolina kitra, tsy mbola nahita na naheno mpilalao baolina kitra tanora (20 taona) izahay izay nanapa-kevitra ny hanao toy ny sehatra sarimihetsika. Jereo ny horonantsary lavorary nataon'i Florentino Luis mifankahita amin'ny sakaizany, Bruna- fotoana izao, nilaza izy fa nanova ny fiainany.
Florentino Luis Fianakaviana:
Ny tsiambaratelo ho an'ny asa mahomby dia tsy avy amin'ny asa mafy irery, fa ny fananana fianakaviana akaiky. Fianakaviana iray izay mifanampy foana sy atambatra ao amin'ny fitiavan'izy ireo. Ao amin'ity fizarana biography ity dia hiresaka aminao misimisy momba ny ray aman-drenin'i Florentino Luis sy ny fianakaviany akaiky izahay.
Hihaona amin'ny fianakaviana akaiky an'i Florentino Luis. Tsy tsara tarehy ve izy ireo? 📷: IG
Momba an'i Florentino Luis Ray:
Araka ny Ny filazalazan'ny tanjona ny prodigy midfield, Dadan'i Tino no mpanamory baolina voalohany voalohany handeha hamonjy ny zanany lahy. Morris Luis dia toa ny karazana dadany izay mahalala tsara ny maha-zava-dehibe ny fifandraisan'ny fianakaviana.
Hihaona amin'i Florentino Luis Dada. Ny raim-pianakaviana super indrindra dia karazana nofinofin'ny ankamaroan'ny olona. 📷: IG
Momba an'i Florentino Luis Neny:
Amin'ny voalohany mijery an'i Laura Luis, azo inoana fa mankasitraka ny maha tanora sy mahafinaritra azy ianao. Sary eto ambany dia mankalaza ny tsingerintaona nahaterahany isaky ny 6 desambra ny renim-pianakaviana farany ary dia hita izy tamin'ny faha-40 taonany.
Hihaona amin'i Florentino Luís 'Mum. Ilay renim-pianakaviana be taraina telo dia nanana an'i Tino raha mbola 20 taona izy. 📷: IG
Florentino Luis dia nihevitra ny reniny niaraka tamin'ny sipany (Bruna) ho olona manan-danja indrindra amin'ny fiainany. Raha mijery akaiky ny sary etsy ambany etsy ambony dia ho tsapanao ny zava-misy fa noraisin'i Tono taorian'ny oran'ny reniny sy ny masony.
Maninona no tsy dia mijery milamina i Florentino Luis (Laura Luis)? Rehefa dinihina tokoa, dia nahavita asa tsara nanangana mpilalao baolina tsara tarehy izy. 📷: Picuki
Ny namana sy ny fianakaviana sasany dia milaza an'i Ramatoa Luis ho 'Ilay Mpampianatra'. Tsy toy ny ankamaroan'ny reny mpilalao baolina kitra i Laura dia mavitrika ao amin'ny Instagram izay mitondra ny anarana hoe 'Boxita Luis.'
Momba ny Rahalahy Florentino Luis:
Ny mpilalao baolina kitra dia manana mpirahalahy tokana (manodidina ny folo taona tamin'ny taonany) izay nofaritany ho Pesky- izay mahatonga olana sy manelingelina foana. Avy amin'ny sary eto ambany dia hita fa i Bruninho dia momba ny zaza mahafinaritra iray, tia olona amin'ny orinasa rahalahiny. Manantena izahay fa hanaraka ny dian-tongotr'i Florentino Luis izy.
Hihaona amin'i Florentino Luis Brother, Bruninho Luis. Toa ny fiainana feno ny zanakalahy faharoa. 📷: Picuki
Momba ny Rahavavy Florentino Luis:
Belnira dia ilay tovovavy manjavozavo izay miseho ho zanaky ny fianakavian'i Luis. Vao teraka ny volana jona 2017 dia midika fa efa telo taona izy toy ny amin'ny fametrahana ity fitantarana ity (Mey 2020). Belnira Luis dia aseho eto ambany miaraka amin-drainy, reniny ary zokiny lehibe.
Hihaona amin'ny rahavavin'i Florentino Luís, Belnira Luis. Ny zaza tao an-tranony dia tsy ho ela dia nahatsapa ny rahalahiny dia ny afovoany mpiaro tsara indrindra eran'izao tontolo izao. 📷: Instagram
Momba an'i Florentino Luis Bebe:
Ilay prodigy an'Antsirabe mpiaro tena, indraindray manodidina ny Mey 2019, dia maty ny renibeny tamin'ny tanana mangatsiaka ny fahafatesana. Raha mitsara avy amin'ilay sary eto ambany dia azo antoka fa izy no Granny ankafiziny. Nandeha nefa tsy hadino, enga anie hitsahatra ny fanahiny amin'ny fiadanana, Amen!
Hihaona amin'ny iray amin'ireo dadabe any Florentino Luís. Vita izy ary enga anie hiadana ny fanahiny. Amen! 📷: Picuki
Florentino Luis Fiainana manokana:
Raha te hahafantatra azy tsara kokoa, dia efa nandroso izahay mba hametahana ny sasany amin'ireo fanaony. Ny voalohany sy ny voalohany, Florentino Luis dia isan'ireo ekena Hafahafa hafahafa sy fombafomba mialoha. Alohan'ny lalao iray lehibe, ny mpanao baolina dia mitarika ny fahazarana hipetraka manatrika ny lanitra. Ity fihetsika ity ((sary eto ambany) dia iray izay nataony talohan'ny famaranana lehibe.
Florentino Luís Personal Life Facts. Ny fanaovany ny finoanoam-poana mialoha ny lalao dia mampiseho fa iray amin'ireo mpilalao baolina kitra iray izy. 📷: IG
Momba ny toetrany, ny tanora dia mampiseho toetra malala-tanana sy mafana. Raha tsy hita ny nilalao baolina dia mety hiaraka amin'ny namana any amin'ny dobo filomanosana i Tino. Farany, aleony misambotra Paul Pogbany fomba fijerin'ny volony.
Aza isaina izy, rehefa mieritreritra ny mpilalao baolina kitra izay mihinana amin'ny toeram-pisakafoanana posh fotsiny ianao, mitondra fiara mitokana, manana trano lehibe (mansions) ary mitafy akanjo haute couture. Ny afovoan-jaza matotra matotra, araka ny voalaza eto ambany dia tsy ny mandany vola ho azy.
Florentino Luís Fiainana- Eny, ny fahatsapany akanjo dia tsy misy manoratra any an-trano, fa izay midika fiainana miaina manetry tena ho an'ny mpilalao baolina kitra. 📷: Picuki
Amin'ity dingana farany amin'ny fanoratantsika ity, manambara aminao izahay tranga tsy mbola fantatrao fa nisy an'i Florentino Luis. Tsy misy hatak'andro fa hanomboka isika
Zava-misy # 1- Famoronana Florentino Luis Salary
Fotoam / karama
Vola amin'ny saribakoly ($)
Vola amin'ny Pounds (£)
Per Year € 312,480 $339,145 £ 278,316
isam-bolana € 26,040 $28,262 £ 23,193
Isan-kerinandro € 6,000 $6,512 £ 5,344
Isan'andro € 587 $930.3 £ 763.4
Per Hour € 35,7 $38.8 £ 31.8
Isaky ny Minut € 0.60 $0.65 £ 0.53
Isaky ny segondra € 0.01 $0.01 £ 0.01
Izany no Nahazo karama i Florentino Luis nanomboka tamin'ny nijerena ity pejy ity.
Zava-misy # 2- Mampitaha ity karama ity amin'ny fidiram-bolan'ny olom-pirenena Salanja:
Fantatrao ve? ... Ny teratany portogey salanisan'ny anjerimanontolo no mahazo $ 1547 isam-bolana. Mila miasa mandritra ny 1.4 taona ity olona ity izay tokony ho iray taona sy dimy volana eo ho eo amin'ny karama an-tsitrapo Florentino Luis (tarehimarika 2020 Mey).
Zava-misy # 3- Antony ho an'i Florentino Luis Nickname:
Ny media portogey dia milaza azy ho 'O Polvo' (The Octopus).Nisaotra ny tongony ity anaram-bosotra ity, izay efa ela. Izy io koa dia satria afaka maninjitra ny tongony lava i Florentino na dia eo amin'ny zoro mamatotra aza mba hahazoana aina. Paul Pogba koa dia mitondra io anaram-bosotra io.
Zava-misy # 4- Izay lazain'ny FIFA ao aminy:
Hatrany amin'ny stats eto ambany dia hanaiky ianao fa i Tino dia mandeha miandalana ho lasa iray ny afovoany miaro tena tsara indrindra eran'izao tontolo izao.
Ny antokon-tserasera mpiaro mpiaro an'ny FIFA dia miompana amin'ny hoaviny. Tokony hiambina ianao! 📷: SoFIFA
Zava-misy # 5- Fanoloran-tena:
Ny ray aman-drenin'i Florentino Luis dia nanangana azy ho trano kristiana. Na izany aza, noho ny antony sasany, dia tsy natao batisa izy tamin'ny mbola kely. Ny hevitra hanombohana ny fombafomba Kristiana dia nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2020 taorian'ny nanolorany ny sipa sakaizany, Bruna Guerreiro.
Florentino Luis Religion- Ny batisany dia manazava ny finoany kristiana.📷: Instagram
Teo ambonin'io dia nanondrika ny lohany tamin'ny rano (ny fanaovana batemy) ireo mpikambana ao amin'ny fiangonany. Araka ny filazany, ny fanaovana batisa dia manisy marika vaovao ho an'ny fiainany.
Ny latabatra etsy ambany dia nanapotika an'i Profil Florentino Luis ho lasa fampahalalana fohy fohy izay mamintina ny tantarany.
Fanadihadiana momba ny Biôgrafia
Anarana feno: Florentino Ibrain Morris Luís.
teraka: 19 aogositra 1999 tao Lisbon, Portugal.
Ray aman-dreny: Laura Luis (Neny) sy Morris Luis (Ray).
mpiray tam-po: Bruninho Luis (rahalahy) ary Belnira Luis (rahavavy).
vadiny; Bruna Guerreiro (sakaiza taloha).
hahavony: 1.84 m (amin'ny metatra) ary 6 ft 0 in (amin'ny tongotra sy refy).
fanabeazana: Tercena (futsal).
anaram-bositra: 'O Polvo' (The Octopus)
fialam-boly fotsiny: Lomano.
Misaotra noho ny famakiana ny lahatsoratra be dia be momba ny Florentino Luis Childhood Tantara sy ny Biography. Ho antsika, ilay tanora dia voatendry ho amin'ny fahombiazana ary tsy misy fotoana, natokana hanaraka ny dian-tongotry ny kintan'ny Benfica taloha - ny tia an'i Ederson, Bernardo Silva, Andre Gomes, Joao Cancelo ary Joao Felix.
Azafady mba lazao aminay, ao amin'ny faritra fanehoan-kevitra, izay hevitrao momba ny lahatsoratra momba an'i Florentino Luis izay tena mamirapiratra tokoa ny ho avy. Ohatra, toa tsy hihoatra an'i N'golo Kante ve izy?
Diogo Jota tantaram-pitiavana bebe kokoa fantatry ny mpahay siansa momba ny tantaram-piainana
Ruben Neves Tantara Momba ny Tantaram-pahamendrehana Ankapobe Zava-bita
Helder Costa ny tantaran'ny tantaram-pahaterahana an-dàlambe Helder Costa Plus